ဒီတော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို Brand တွေဝတ် ပြီး ကြွားဝါ ခရီးထွက်နေတဲ့လူတွေကို အသိစိတ်ကပ်ဖို့ သတိပေးလာတဲ့ နိုဗန်ထူး – XB Media & News
ဒီတော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို Brand တွေဝတ် ပြီး ကြွားဝါ ခရီးထွက်နေတဲ့လူတွေကို အသိစိတ်ကပ်ဖို့ သတိပေးလာတဲ့ နိုဗန်ထူး
ဒီတော်လှန်ရေးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို Brand တွေဝတ်ပြီး ကြွားဝါ ခရီးထွက်နေတဲ့လူတွေကို အသိစိတ်ကပ်ဖို့ သတိပေးလာတဲ့ နိုဗန်ထူး…
The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ Winner တစ်ယောက်ဖြစ်သူ နိုဗန်ထူးကတော့ လက်ရှိမှာ သူဝါသနာပါတဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်း ထက် တစ်နိုင်ငံလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကျရောက်နေမှုမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း
ရုန်းထွက်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ နိုဗန်ထူးက Brand တွေဝတ် စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေစားရင်း အပျော် ခရီးတွေသွားလာနိုင်သူတွေကို သတိပေးစကားပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နိုဗန်ထူးက “Brand တွေဝတ်ပြီး ကြွားနေကြတုန်းလား? စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေနဲ့ ကြွယ်နေကြတုန်းလား? အပန်းဖြေ ခရီးတွေ ထွက် နေကြတုန်းလား? အဲ့အတိုင်းသာ ဆက်သွားနေရင် ခင်များတို့လည်း ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့ ောက်ကျင့်ယုတ်မှုခံရတော့မှာ အနှေးနဲ့ အမြန်ဘဲ။တိုက်ပွဲတွေ ပိုပြင်းထန်လာရင် ပြည်မမှာကျန်တဲ့ခင်များတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ လုယက်စားသောက်ရင်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သူတို့ဖျက် ဆီးသွားမှာကို မမေ့နဲ့ ။” ဆိုပြီး သတိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုဗန်ထူးကတော့ Brand တွေဝတ်၊ အပန်းဖြေခရီးတွေသွားပြီး စားသောက်နေပြီး ဘာမှမဖြစ်သလို သွေးအေးနေကြသူတွေလည်း တချိန်ချိန် မှာ စကစရဲ့ အကျင့်ယုတ်မှုခံရမှာ အနှေး၊ အမြန်ပဲဆိုပြီး သတိပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Source: Novem Htoo ‘s fb
ဒီေတာ္လွန္ေရးကို ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလို Brand ေတြဝတ္ၿပီး ႂကြားဝါ ခရီးထြက္ေနတဲ့လူေတြကို အသိစိတ္ကပ္ဖို႔ သတိေပးလာတဲ့ ႏိုဗန္ထူး…
The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ Winner တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ႏိုဗန္ထူးကေတာ့ လက္ရွိမွာ သူဝါသနာပါတဲ့ ဂီတလမ္းေ ၾကာင္း ထက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က်ေရာက္ေနမႈမွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း
႐ုန္းထြက္ေနသူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ႏိုဗန္ထူးက Brand ေတြဝတ္ စားေကာင္းေသာ က္ေကာင္းေတြစားရင္း အေပ်ာ္ ခရီးေတြသြားလာႏိုင္သူေတြကို သတိေပးစကားေျပာလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ႏိုဗန္ထူးက “Brand ေတြဝတ္ၿပီး ႂကြားေနၾကတုန္းလား? စားေကာင္းေသာက္ေကာင္းေတြနဲ႔ ႂကြယ္ေ နၾကတုန္းလား? အပန္းေျဖ ခရီးေတြ ထြက္ ေနၾကတုန္းလား? အဲ့အတိုင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ ခင္မ်ားတို႔လည္း ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ရဲ႕ ောက္က်င့္ယုတ္မႈခံရေတာ့မွာ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ဘဲ။တိုက္ပြဲေတြ ပိုျပင္းထန္လာရင္ ျပည္မမွာက်န္တဲ့ခင္မ်ားတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ လုယက္စားေသာက္ရင္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ သူတို႔ဖ်က္ ဆီးသြားမွာကို မေမ့နဲ႔ ။” ဆိုၿပီး သတိေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုဗန္ထူးကေတာ့ Brand ေတြဝတ္၊ အပန္းေျဖခရီးေတြသြားၿပီး စားေသာက္ေနၿပီး ဘာမွမျဖစ္သလို ေသြးေအးေ နၾကသူေတြလည္း တခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ စကစရဲ႕ အက်င့္ယုတ္မႈခံရမွာ အေႏွး၊ အျမန္ပဲဆိုၿပီး သတိေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အနုပညာလောကထဲကို ပရိတ်သတ်တွေ အံ့ဩသွားရ မယ့် ပုံစံအဆန်းနဲ့ ပြန်လည်ထိုးဖောက်လာတဲ့ ဖြူဖြူ ထွေး